Ungalahli izibuko zakho noma okhiye bakho ngenxa yeNOMAD ne-AirTag | Izindaba ze-IPhone
Ungalahli izibuko zakho noma okhiye bakho ngenxa yeNOMAD nama-AirTag
Sivivinye izesekeli ezimbili ezintsha zokusetshenziswa ne-Apple AirTags. Ibhande lokugoqa nokhiye okhiye indawo ye-Apple bangaphinde balahlekelwe futhi.
1 Intambo yezingilazi zakho
2 Isihluthulelo sokhiye wesikhumba
Intambo yezingilazi zakho
Uma sicabanga ukuthi yiziphi izinto esilahlekelwa kaningi kuzo, impela iningi lethu lingavuma ngezibuko zelanga. Yebo, lokhu kufinyelela esiphethweni ngenxa yale ntambo entsha yeNomad leyo Ngaphezu kokukuvumela ukuba uzilengise entanyeni yakho, into eseyimfashini manje, futhi ikuvumela ukuthi ubeke i-AirTagNgakho-ke uzothola isaziso (nge-iOS 15) njalo lapho usuka ezibukweni, futhi uma ugcina ngokulahlekelwa yizo, ungazithola ngohlelo Lokucinga.
Kuyintambo yezingilazi enokubukeka okujwayelekile, enezingwegwe zosayizi ezahlukahlukene zokuzivumelanisa nobukhulu bamathempeli ezibuko. Kepha inokucacile kokufaka i-disc encane epulasitiki esebenza ukulungisa ubude bomsila wenkomo kanye nokufaka i-AirTag. Njengoba uNomad esho kuwebhusayithi yabo, imisila yenkomo ayinamanzi, kepha i-AirTag ayinjalo, ngakho-ke akufanele uyithole imanzi ngoba indawo yakho ye-Apple ingalimala.
Isihluthulelo sokhiye wesikhumba
Esinye isesekeli esisivivinya namuhla isihluthulelo sokhiye wesikhumba. Ngomqondo ofanayo nolunye uhlobo lweNomad esivele siluhlolile (isixhumanisi), lesi sihloko esingukhiye sizobathola okhiye bakho nomaphi lapho ubashiya khona, futhi kusuka ku-iOS 15 futhi izokwazisa noma nini lapho usuka kuyo ukuze ugweme ukulahlekelwa yiyo. Yenziwe ngesikhumba seHorween, njengazo zonke izesekeli zeNomad, ukwakheka nokuqedwa kwayo kuhle kakhulu, futhi kubukeka buhle kakhulu njengokhiye wesikhiye. Futhi, njengoba ifihla i-AirTag, kuzoba nzima ngabo ukukhomba ukuthi une-locator kuwe.
Nomad Inamamodeli amabili, ansundu nomnyama, womabili aneringi yensimbi emnyama. Kulesi sihlalo esinokhiye akukho okunamathiselwe noma okunamathiselwe, i-AirTag ifakwa kalula ngembobo encane kukhiye, futhi ingaphakathi kwesikhwama esincane esitholakala esikhunjeni ngokubumba okushisayo. Ngosayizi nesisindo ngeke ubone mehluko nganoma yisiphi isihluthulelo esijwayelekile ongasisebenzisa njalo.
Ama-AirTag abelokhu edala ukuzwa selokhu kwethulwa ngenxa yokusebenziseka kwawo kalula nokusetshenziswa okuhle kakhulu. Ngenxa yomklamo wazo, isesekeli sicishe sibaluleke kakhulu ukusisebenzisa, njengalesi sikhiya esingukhiye nentambo yezibuko. Isikhiye senhloko kanye nentambo kuyindlela enhle kakhulu kulabo abafuna ukuyeka ukulahlekelwa izibuko nokhiye babo.
I-Nomad brown and black keychain ye- € 34,99 (isixhumanisi)
Intambo yengilazi yeNomad ye $ 34,95 kuwebhusayithi esemthethweni (isixhumanisi)
Inhle futhi iyasebenza
Intambo yezingilazi ayikatholakali eSpain
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » eziningana » Ungalahli izibuko zakho noma okhiye bakho ngenxa yeNOMAD nama-AirTag
Isizini yokuqala yeKhaya Ngaphambi Kobumnyama, itholakala mahhala ku-Apple TV +
I-Apple Watch Series 7 izoletha ukudayela okusha okushintshelwe esikrinini sayo esisha